Izikhokelo - I-Creativos kwi-Intanethi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Itemplate ligama lesiNgesi elisetyenziselwa ukuchaza itemplateOko kukuthi, ukubonakala kwephepha lewebhu, usetyenziso okanye naluphi na olunye usetyenziso apho ukwahlula kunokusetyenziswa phakathi kokubonakala kwayo kunye nomxholo. Okwangoku unako Khuphela izigidi zeetemplate Nangona kukho ukubakho kokudala isiko elinye ukuba sinenkqubo eyimfuneko kunye nolwazi loyilo ukulungiselela le njongo.
por UNerea Morcillo yenzayo Iinyanga ze3 .
Kukho iinkqubo ezenza kube lula kuwe ukwenza iintetho ze-intanethi, ezifana nePowerPoint. Kwizavenge ezidlulileyo,…
Izakhelo zePoyinti zaMandla opopayi zasimahla
por UMary Rose yenzayo Iinyanga ze5 .
I-Power Point yinkqubo yokubonisa umzobo, equlethe iziqwenga zolwazi ngendlela efanayo nencwadi ...
por UNerea Morcillo yenzayo Iinyanga ze5 .
Ngokufika kwe-e-commerce, abasebenzisi abaninzi baye badinga ukuhlaziya inkalo yeshishini labo koku ...
por UNerea Morcillo yenzayo Iinyanga ze6 .
Kwizavenge ezidlulileyo, sithethe nawe nge-InDesign. Ayiyiyo kuphela inkqubo apho izixhobo ezahlukeneyo zigcwele ...
por Lola ifani yenzayo 1 ngonyaka .
Sibuya noluhlu lweetemplate zasimahla ngenjongo yeediploma ezihlala zinikezelwa ekupheleni kwe ...
Sikulo nyaka we-2020 kwaye siza kugxininisa into entle: sinamakhulu emithombo yezixhobo zeetemplate ...
Namhlanje sinezixhobo ezingapheliyo kwaye ngelixa kwiminyaka embalwa edlulileyo bekunzima ukusondela kwiitemplate ...
por UManuel Ramirez yenzayo 3 iminyaka .
Ukuba ulungiselela uyilo lwe-triptych, le template ngokuqinisekileyo iya kuza iluncedo ukukukhokela. Kuyo uyakufumana yonke into oyifunayo ukuthintela iimpazamo xa uyiprinta kwaye ngaphezulu kwako konke ukunqanda izoyikiso kunye nezilungiso zomzuzu wokugqibela kuba isicatshulwa esithile okanye umfanekiso obungalindelanga unqunyulwe.
Iiposikhadi zedijithali zale Krisimesi
por UJudit Murcia yenzayo 3 iminyaka .
Esinye sezona zithethe zintle zeKrisimesi, kwaye esiphulukana nazo ngokuhamba kwexesha zezi ...
por UManuel Ramirez yenzayo 4 iminyaka .
Sinezinye izibonelelo ezikhethekileyo ezingama-250 zeetemplate kunye neekhompyuter zamakhadi oshishino, iiflaya kunye nokunye okuninzi ngazo ...
por UMelisa Perrotta yenzayo 4 iminyaka .
Uyilo lwegraphic licandelo lobugcisa obunegalelo ekwenzeni yonke into ibonakale intle. Ye…
Iitemplate ze-HTML5 eziphendulayo
Isifanekiso simahla sePSD seTrifold
Iitemplate ezingama-40 ze-Keynote kunye nePower Point